Lasin-Jobily faha-90 taonan’ny Tily – FJKM Ambavahadimitafo Lasin-Jobily faha-90 taonan’ny Tily |
Lasin-Jobily faha-90 taonan’ny Tily
Publié le 31 août 2014 à 06:08
Fifaliana ho an’ireo Tily sy Mpanazava Tranainy ary Sakaiza mpikambana ao amin’ny TMT Ambavahadimitafo ny nanatrika ny fanokafana ny Lasin-Jobily faha-90 taonan’ny Tily eto Madagasikara teny Ambatomanga ny 23 hatramin’ny 28 Aogositra 20014 lasa teo.
Marihina fa niavaka tokoa ny fisehoan’ny TMT Ambavahadimitafo izay nanao ny fanamiana nitovy ary nahazoana tehaka sy sitraka betsaka rehefa nandalo ny sehatra nipetrahan’ireo tompon’andraikitry ny Lasin-Jobily izay nahitana ny Filohan’ny Jobily izay tsy iza fa mpikambana ato amin’ny TMT Ambavahadimitafo dia ny Jeneraly RAVELOARISON Léon Claude.
Maro tamin’izy ireo no efa nanatrika fotoan-jobily tahaka izao fony izy ireo mbola am-perinasa.
Nampatsiahy ny fiainana an-dasy hatrizany tokoa ny fahatongavana tany ka tantara sy hira ary afon-dasy teo anivon’ny TMT Ambavahadimitafo no nentina nahatsiaro izany. Finaritra tokoa ireo Tily am-perinasa ao amin’ny SAMPATI Fivondronana faha-XIII eto Ambavahadimitafo fa manana ireo raiamandreny ao amin’ny TMT izay nanohana azy ireo tamin’ny nahazoan’izy ireo nanatrika ity Lasin-Jobily faha-90 taona ity.
Zoky sy zandry no nifanotrona ka nahazo toky ery ny tsirairay fa ho tsara ny fiainana an-dasy satria isika teto Ambavahadimitafo ihany no nahitana fivondronana nisy mpikambana tranainy mavitrika tonga nanome hery ireo ankizy am-perinasa sy nahafahan’izy ireo nihantahantana. Dia samia ho velon’aina daholo fa ny faniriana dia ny hahazoana manatrika indray ny fankalazana ny faha-100 taonan’ny Tily eto Madagasakara é!